Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားသစ်မှာ Johnny Depp မပါတော့ဘူးလား...? - MoviesFan Reviews
Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားသစ်မှာ Johnny Depp မပါတော့ဘူးလား…?
ဟောလီးဝုဒ်နာမည်ကျော်မင်းသား Johnny Depp ပါဝင်ထားတဲ့ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ဇာတ်ကားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ကမှ U. K နဲ့ U. S နိုင်ငံတွေမှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Budget $ 200 million နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီ ဇာတ်ကားဟာ ရုံတင်ထားတာ သုံးရက်လောက်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် အခုဆိုရင် $ 253.2 million တောင် ပြန်ဝင်နေခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်နေခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။
Johnny Depp ပါWင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားသစ်က အခုလို အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အင်တာနက်ပေါ်က မီဒီယာစာမျက်နှာတွေထက်မှာ ပလူပျံနေခဲ့တာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ အဲဒီလိုပဲ Johnny Depp နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ နောက်ထပ် သတင်းတစ်ခုကလည်း ခုရက်ပိုင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေထက်မှာ ရေပန်းစားလာနေခဲ့တာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
အဲဒါက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Pirates of The Caribbean ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ Captain Jack Sparrow နေရာက အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ Johnny Depp ဟာ နောက်ရိုက်မယ့် Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားသစ်တွေထဲမှာတော့ မပါဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
what's your favorite?😜
A post shared by Pirates of the Caribbean (@pirates.ofthe.caribbean) on Apr 7, 2018 at 2:06pm PDT
တကယ်တော့ Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားတွေနဲ့ Johnny Depp ဆိုတာက လုံးဝခွဲခြားလို့ မရနိုင်တဲ့ အရာနှစ်ခုလိုပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားတွေလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ Johnny Depp ကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ အခုလိုထွက်လာတဲ့ သတင်းအစအနကြောင့် Pirates of The Caribbean ဇာတ်လမ်းတွေကို အမှန်အကန် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်တွေ ဖြစ်နေခဲ့ကြရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ပြီးတော့ Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားတွေထဲက Johnny Depp သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Captain Jack Sparrow နေရာမှာလည်း အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်နဲ့ အစားထိုးသရုပ်ဆောင်ခိုင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေကလည်း ထွက်နေပြန်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အသံဟာ ပိုပြီး ဆူညံလာကြတာကိုလည်း မြင်နေရပါတယ်။
Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားသစ်ထဲက Johnny Depp နေရာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်အဖြစ် သတင်းထွက်နေတာကတော့ Star Wars ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ Rey ဆိုတဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Daisy Ridley ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
A post shared by Daisy Ridley (@daisyridrey) on Mar 14, 2018 at 9:22am PDT
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Daisy Ridley ဟာ ဓားသိုင်းဘာညာ ကစားတာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Star Wars ဇာတ်လမ်းတွေကို ရိုက်ခဲ့စဉ်က လေ့လာခဲ့ရတာမို့ သိပ်မစိမ်းတော့တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက် ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါတဲ့။ ပြီးတော့ Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားတွေကို ပင်တိုင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ Walt Disney ကုမ္ပဏီဟာ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးလူစွမ်းကောင်းတွေ ပါ၀င်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို တော်တော်လေး ထုတ်လုပ်လာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာတော့ Walt Disney ကုမ္ပဏီဘက်က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာကိုမှ တရားဝင် ထုတ်ဖော်မပြောသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလတုန်းကတော့ Pirates of The Caribbean ဇာတ်ကားသစ်အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ကြပြီး Rhette Reese နဲ့ Paul Wernick တို့က ဇာတ်ညွှန်းကို စရေးနေခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ Jerry Bruckheimer ကလည်း ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်နဲ့ ပါ၀င်လာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ နောက်… အဲဒီလို အစီအစဉ် ဆွဲတဲ့နေရာကို အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် Johnny Depp က မလာခဲ့ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
Pirates of The Caribbean ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထဲမှာ The Curse of the Black Pearl ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကားက အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တာမို့ ၂၀၀၆ ဇူလိုင်မှာ Dead Man’s Chest, ၂၀၀၇ မေလထဲမှာ At World’s End, ၂၀၁၁ မေလထဲမှာ On Stranger Tides, ၂၀၁၇ မေလထဲမှာ Dead Men Tell No Tales စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ကားတိုင်းလိုလို အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အသစ်ရိုက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ Pirates of The Caribbean ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်အတွက် အဓိကသရုပ်ဆောင် အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောလဟာလတွေ ထွက်နေခဲ့တာကတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ တကယ်မှန်မမှန် ဆိုတာတွေကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားကြရဦးမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ။
Action & Adventure, celebrity news, Hollywood, Walt Disney
Previous Post: တကယ်အသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာတာ မြင်ရမယ့် ဆင်ကလေး Dumbo
Next Post: Genie ဇာတ်ရုပ်အတွက် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Will Smith